Update: DF Somaliya oo sheegtay tirada waddamada ay ku casuuntay Shirka berri ee Muqdisho + War-Saxaafadeed | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Update: DF Somaliya oo sheegtay tirada waddamada ay ku casuuntay Shirka berri...
Muqdisho (Halqaran.com) – DF Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed kasoo saartay shir heer caalami ah oo Tallaadada berri ka furmaya magaalada Muqdisho.
Shirka Iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho markii ugu horeysay ka furmaya 1-da bisha nasoo aadan ee October, waxuuna socon doonaa ilaa 2-da October oo ku beegan maalinta Arbacada.
War-saxaafadeedka kasoo baxay Dowladda Federaalka ayaa lagu sheegay in ay soo dhawaynayso shirka caalamiga ah ee iskaashiga Soomaaliya, oo horay loogu qaban jiray qaar ka mid ah dalalka reer Yurub, waxaana lagu sheegay warka kasoo baxay dowladda in ay ka qeyb galayaan wakiillo ka socda in ka badan 50 dowladood.
Warkan caawa ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yiri, “Dowladda Federaalka Soomaaliya, waxaa ka go’an in ay sii laba jibaarto dadaalada lagu hormarinayo dadka iyo dalka Soomaaliya, waxayna ugu baaqeysaa shacabka Soomaaliyeed in ay qayb libaax ka qaataan xasilinta iyo dib u dhiska dalkooda hooyo”.
shirka berri ee iskaashiga caalamiga